Secret Superstar (2017) | MM Movie Store
အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈ ခငျြတဲ့ (၁၄)နှဈအရှယျ မှတျစလငျမိနျးကလေးတဈယောကျအ ကွောငျးကို ဇာတျအိမျတညျထား ပွီး Aamir Khan၊ Zaira Wasim၊Meher Vij၊ Raj Arjun စတဲ့ သရုပျဆောငျတှေ အဓိကပါဝငျ ထားတာပါ။
အထကျတနျးကြောငျးသူလေးအငျဆူဟာ စညျးကမျးတငျးကပျြလှနျးပွီး အကွငျနာတရားမရှိ တဲ့ ဖခငျရဲ့ အုပျထိနျးမှုအောကျ မှာ နရေသူဖွဈပွီး သမီးကွီးဆိုပေ မယျ့လို့ မိနျးကလေးတှကေို ဖိနှိပျတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးကဖွဈတဲ့အ တှကျ မကျြနှာသာအပေးမခံရပါ ဘူး။
သီခငျြးဆိုဝါသနာပါပွီး အ ဆိုတဈယောကျဖွဈခငျြတဲ့ အငျ ဆူရဲ့စိတျကူးအိပျမကျကို သူ့အမကေ နားလညျသဘောပေါကျပွီး သီခငျြးတှနေဲ့ ထိတှခှေ့ငျ့ပွုပမေယျ့လို့ သူ့အဖသေိသှားတဲ့အခါ မှာ ဆူဟောကျမာနျမဲခံရသလို အငျဆူရဲ့ ဂဈတာလေးပါ ဖကျြဆီးခံရပွီး သီခငျြးဆိုဖို့ကိုလညျး တား မွဈပိတျပငျခံရပါတော့တယျ။
အဆိုဝါသနာရှငျလေး အငျ ဆူဟာ သူ့အဖဘေယျလောကျပဲ မာနျမဲရိုကျနှကျပါစေ သူ့အိပျမကျ ကို အကောငျအထညျဖျောဖို့ လုံးဝလကျမလြှော့ခဲ့ပါဘူး။
အိမျကနေ မှမျဘိုငျးကို တိတျတဆိတျထှကျ ခှာပွီး အောငျမွငျနတေဲ့ တေးရေး ဆရာ အဆိုတျောရှကျတီကူးမားနဲ့ တှပွေီ့း သူ့အိပျမကျတကျ ပိုပွီးအကောငျအထညျဖျောကာ အိမျ မှာ ညှဉျးပနျးနှိပျစကျခံနရေတဲ့ သူ့အမနေဲ့မောငျလေးကို ကယျထုတျ နိုငျဖို့ စိတျကူးထားတာပါ။
သူ့အဖကေ မွို့ပွငျမှာအ လုပျထှကျလုပျတဲ့အတှကျ တဈ ပတျမှာ တဈရကျလောကျပဲ အိမျပွနျလာနိုငျတဲ့ အခွအေနကေို အငျဆူတဈယောကျ ကောငျးကောငျး အသုံးခပြွီး အဆိုပွိုငျပှဲဝငျဖို့ လုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့အဖသေိ သှားပွီး လုံးဝခှငျ့မပွုခဲ့ပါဘူး။
ဒါပမေဲ့လညျး ဇှဲမလြှော့တဲ့ အငျဆူဟာ သီခငျြးဆိုနတေဲ့ဂီတ ဗီဒီယိုတဈခုကို Youtube မှာတငျ တဲ့အခါမှာ ဝငျကွညျ့တဲ့သူတှေ ညတှငျးခငျြးတကျလာသလို သူ တှခေ့ငျြနတေဲ့ တေးရေးဆရာ၊ အဆိုတျော ရှကျတီကူးမားက လညျး အငျဆူကို သတိထားမိ သှားပါတော့တယျ။
နှိပျခံ အငျဆူတဈယောကျ အတားအဆီးတှေ၊ အခကျအခဲ တှေ၊ အတိုကျအခံတှကွေားက သူဖွဈခငျြတဲ့ အဆိုတျောတဈ ယောကျဖွဈခှငျ့ရမှာလားဆိုတာ တော့…. ။
အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ် ချင်တဲ့ (၁၄)နှစ်အရွယ် မွတ်စလင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အ ကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ထား ပြီး Aamir Khan၊ Zaira Wasim၊Meher Vij၊ Raj Arjun စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အဓိကပါဝင် ထားတာပါ။
အထက်တန်းကျောင်းသူလေးအင်ဆူဟာ စည်းကမ်းတင်းကျပ်လွန်းပြီး အကြင်နာတရားမရှိ တဲ့ ဖခင်ရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက် မှာ နေရသူဖြစ်ပြီး သမီးကြီးဆိုပေ မယ့်လို့ မိန်းကလေးတွေကို ဖိနှိပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကဖြစ်တဲ့အ တွက် မျက်နှာသာအပေးမခံရပါ ဘူး။
သီချင်းဆိုဝါသနာပါပြီး အ ဆိုတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ အင် ဆူရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို သူ့အမေက နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သီချင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ပြုပေမယ့်လို့ သူ့အဖေသိသွားတဲ့အခါ မှာ ဆူဟောက်မာန်မဲခံရသလို အင်ဆူရဲ့ ဂစ်တာလေးပါ ဖျက်ဆီးခံရပြီး သီချင်းဆိုဖို့ကိုလည်း တား မြစ်ပိတ်ပင်ခံရပါတော့တယ်။
အဆိုဝါသနာရှင်လေး အင် ဆူဟာ သူ့အဖေဘယ်လောက်ပဲ မာန်မဲရိုက်နှက်ပါစေ သူ့အိပ်မက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လုံးဝလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။
အိမ်ကနေ မွမ်ဘိုင်းကို တိတ်တဆိတ်ထွက် ခွာပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ တေးရေး ဆရာ အဆိုတော်ရှက်တီကူးမားနဲ့ တွေ့ပြီး သူ့အိပ်မက်တက် ပိုပြီးအကောင်အထည်ဖော်ကာ အိမ် မှာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ သူ့အမေနဲ့မောင်လေးကို ကယ်ထုတ် နိုင်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာပါ။
သူ့အဖေက မြို့ပြင်မှာအ လုပ်ထွက်လုပ်တဲ့အတွက် တစ် ပတ်မှာ တစ်ရက်လောက်ပဲ အိမ်ပြန်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို အင်ဆူတစ်ယောက် ကောင်းကောင်း အသုံးချပြီး အဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အဖေသိ သွားပြီး လုံးဝခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့တဲ့ အင်ဆူဟာ သီချင်းဆိုနေတဲ့ဂီတ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Youtube မှာတင် တဲ့အခါမှာ ဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေ ညတွင်းချင်းတက်လာသလို သူ တွေ့ချင်နေတဲ့ တေးရေးဆရာ၊ အဆိုတော် ရှက်တီကူးမားက လည်း အင်ဆူကို သတိထားမိ သွားပါတော့တယ်။
နှိပ်ခံ အင်ဆူတစ်ယောက် အတားအဆီးတွေ၊ အခက်အခဲ တွေ၊ အတိုက်အခံတွေကြားက သူဖြစ်ချင်တဲ့ အဆိုတော်တစ် ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရမှာလားဆိုတာ တော့…. ။